सूचना/प्रबिधि – जलजला अनलाइन
टिकटकमाथि अमेरिकाको खतरनाक एक्सन
फागुन १८, काठमाडौँ । छोटो भिडियो शेयरिङ एप टिकटकमाथि अमेरिकामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै जरिवाना लागेको छ । बालबालिका सम्बद्ध डाटाको गोपनियता सम्बन्धी मुद्दामा टिकटकले ५७ लाख डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । साथै टिकटकले अबदेखि १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका प्रयोगकर्ताको गोपनियता सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था पनि लागू गर्नुपर्नेछ । अमेरिकाको संघीय व्यापार आयोगले टिकटकद्वारा कम […]
Posted on March 2, 2019 Author Comments Off on टिकटकमाथि अमेरिकाको खतरनाक एक्सन
फोनको रेडियसनले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव, कुन फोनको प्रभाव कति ? (सुचीसहित)
काठमाडौं । हामीले बोक्ने मोबाइल फोनका गुणबारे धेरैलाई जानकारी छ । तर, यसबाट निस्किने रेडियसनले कति नोक्सान गर्छ ? के मोबाइल फोनको रेडियसनले ट्युमर हुने खतरा हुन्छ ? यसबाट कसरी बच्ने ? यस्ता विषयमा धेरै वैज्ञानिक लामो समयदेखि अनुसन्धानमा छन्। रेडियो फ्रिक्वेन्सी वेभ ‘नन आओेनाइजेसन’ रेडिएसन हो, जो एक्स–रे र ‘अल्ट्रावायरल’ रेडियसनको तुलनामा कम तेजिलो […]
Posted on February 21, 2019 Author Comments Off on फोनको रेडियसनले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव, कुन फोनको प्रभाव कति ? (सुचीसहित)
फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल अब दर्ता गर्नुपर्ने
फागुन १, काठमाडौं । सरकारले फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सञ्चालनका लागि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालले समेत कानुन तयार भएपछि दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता भैसक्नुपर्ने मिति भने सरकारले तोक्नेछ। सरकारले नयाँ सामाजिक सञ्जाल […]
Posted on February 13, 2019 Author Comments Off on फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल अब दर्ता गर्नुपर्ने
माघ २८, काठमाडौं । फेसबुकले आफ्ना दुई अर्ब भन्दा धेरै प्रयोगकर्ताका डाटाहरुको बलमा आफ्ना विशाल विज्ञापन व्यवसाय स्थापित गरेको छ । तर फेसबुकको यहीँ विशाल डाटाबेस उसका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्नेवाला छ । गत बिहीबार यसको एउटा प्रष्ट संकेत देखा परेको छ । जर्मन सरकारले फेसबुकमाथि आफ्नो बजारको आधिपत्यलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै आफ्नो […]
ल्याप्टप, कम्प्युटर वा पेनड्राइभबाट डिलिट भएको फाइल रिकभर गर्ने सजिलो उपाय
काठमाडौँ । प्रविधिको विकास र त्यसको बिस्तारित प्रयोगसँगै सजिलो भएको छ । तर कहिले काहिँ यहि सजिलोको माध्यमकै कारण तनाव हुने गरेको छ । विशेष गरी आफ्ना महत्वपूर्ण सामग्रीको भण्डारण अर्थात स्टोरेज गर्ने थलो बनेको छ ल्याप्टप, कम्प्युटर तथा पेनड्राइभसहितका एक्सटर्नल डिभाइस । तर कहिले काहिँ आफूले स्टोर गरेका फाइनल असावधानीका कारण डिलिट हुन्छ । […]
Posted on February 2, 2019 Author Comments Off on ल्याप्टप, कम्प्युटर वा पेनड्राइभबाट डिलिट भएको फाइल रिकभर गर्ने सजिलो उपाय
टेलिकमले ल्यायाे पत्याउनै नसकिने २२ अफर, यस्ता छन् नयाँ अफरहरु (सुचिसहित)
पुस २९, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले एकै पटक २२ वटा अफर सार्वजनिक गरेको छ। यसमा कम्पनीले पहिले अटम अफर अन्तर्गतका सेवामा सहित केही थप गरि नयाँ सुविधा उपलब्ध गराएर विन्टर अफर ल्याएको हो। विन्टर अफरको रुपमा कम्पनीले ल्याएको नयाँ योजना अन्र्तगत प्रयोगकर्ताले ६ रुपैयाँमा एक घण्टासम्म कल गर्न पाउने भएका छन्। कम्पनीले आइतबारदेखि लागू हुने […]
Posted on January 13, 2019 Author Comments Off on टेलिकमले ल्यायाे पत्याउनै नसकिने २२ अफर, यस्ता छन् नयाँ अफरहरु (सुचिसहित)
नाबालक छोरीहरुलाई छोडेर आमा बेपत्ता भएपछि छोरीहरुको रुवाबासी, श्रीमान आँशु झार्दै लाइभमा (भिडियो)
काठमाडौँ । ममताकी खानीको उपमा दिइने आमा जव निर्दयी बनिदिन्छिन् तब एक शुन्दर परिवार क्षणभरमै भताभुङ्ग हुन केही समय लाग्दैन । त्यस्तै भयो जव आफ्नो नाबालक छोरीहरुलाई छोडेर उदयपुर गाईघाटकी सर्मिला राई माइतबाट एकाएक गायब भइन् परिवारमा रुवाबासी चल्यो नाबालक छोरीहरु आमा घर छाडेर गएदेखि डाँको छोडेर रोइरहेका छन् । यो सब देखेर श्रीमान भेषराज […]
Posted on December 4, 2018 Author Comments Off on नाबालक छोरीहरुलाई छोडेर आमा बेपत्ता भएपछि छोरीहरुको रुवाबासी, श्रीमान आँशु झार्दै लाइभमा (भिडियो)
दुई दिनमा हर्न बजाउने तुलसीपुरका ९१ सवारी कारबाहीमा
१८ – मंसिर/ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले हर्न बजाउने सवारीलाई कारबाही शुरु गरेको छ । आईतबार शनिबार र आईतबार हर्न बजाउने ९१ सवारीलाई कारबाही गरेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायब निरीक्षक विवेक महराले जानकरी दिए । हर्न निषेधित क्षेत्रमा ठूलो श्वरमा हर्न बजाउने सवारीहरु आईतबार ४५ वटा र सोमबार ४६ वटा कारबाहीमा परेको उनले बताए […]
Posted on December 4, 2018 Author Comments Off on दुई दिनमा हर्न बजाउने तुलसीपुरका ९१ सवारी कारबाहीमा
मंगल ग्रहमा अन्तरिक्ष यान अवतरण, बैज्ञानिकहरु खुसीले उफ्रिए
मङ्सिर ११, काठमाडौं । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको यान मंगलग्रहमा सफलतापूर्वक अवतरण गरेको छ । ‘इन्साइट ल्याण्डर’ नाम दिइएको अन्तरिक्ष यान नेपाली समयअनुसार मंगलबार बिहान करिब पौने २ बजेतिर मंगल ग्रहमा अवतरण गरेको हो । मंगल ग्रहको जमिन र आन्तरिक भागको अध्ययन गर्ने लक्ष्यसहित नासाले ‘इन्साइट ल्याण्डर’ नामक अन्तरिक्ष यान पठाएको हो । यो यान […]
Posted on November 27, 2018 Author Comments Off on मंगल ग्रहमा अन्तरिक्ष यान अवतरण, बैज्ञानिकहरु खुसीले उफ्रिए
अर्थ/विकास मुख्य समाचार सूचना/प्रबिधि
देशभरका गाडीलाई ट्रयाकिङ गर्ने तयारी सरकारको तयारी
कात्तिक ७, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका सवारी साधनलाई जिपिएसबाट ट्रयाकिङ गर्ने तयारी थालेको छ । सुरक्षित र भरपर्दो यात्राका लागि ट्रयाकिङ गर्ने योजना बनाएको र प्रारम्भिक काम अघि बढाउन लागेको विभागले जानकारी दिएको छ। महानिर्देशक लावण्य ढकालले प्रविधि र प्रणालीमा नेपाल अनुभवी नभएकोले जिपिएस ट्रयाकिङका लागि दातृ निकायसँग सहकार्य गरी काम अघि बढाइने […]
Posted on October 24, 2018 October 24, 2018 Author Comments Off on देशभरका गाडीलाई ट्रयाकिङ गर्ने तयारी सरकारको तयारी